ဂျက်ဒေါ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျက်ဒေါ်ဆေး (နိုဝင်ဘာလ ၁၉၊ ၁၉၇၆ ခုနှစ်) သည် အမေရိကန်လူမျိုး ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာနှင့် အင်တာနက်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ တွစ်တာကို တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်သည့် Square ကို တည်ထောင်သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်သည်။
(1976-11-19) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၁၉၇၆ (အသက် ၄၃)
US$6.8 billion (October 2018)
ဂျက်ဒေါ်ဆေး၏ မိဘနှစ်ပါးမှာ မာဆီယာ (နဲစမစ်) နှင့် တင်းဒေါ်ဆေားတို့ ဖြစ်ကြသည်။ St. Louis, Missouri တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည်။ သူသည် အင်္ဂလိပ်၊ Irish နှင့် အီတလီလူမျိုးများမှ ဆင်းသက်လာသူ ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူသည် ဒြပ်ထုရောင်စဉ်တိုင်းကိရိယာထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူသည် အိမ်ရှင်မတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဦးလေးသည် ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး ဖြစ်ပြီး သူသည်လည်း ကက်သလစ်ဘာသာကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သူသည် Catholic Bishop DuBourg အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
သူသည် ငယ်စဉ်အခါများက တစ်ခါတစ်ရံ ဖက်ရှင်မော်ဒယ်တစ်ဦးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အသက် တစ်ဆယ့်လေးနှစ် ဖြစ်လာသည့်အခါတွင် ဂျက်ဒေါ်ဆေးသည် dispatch routing တွင် စိတ်ဝင်တစား ရှိလာခဲ့သည်။ သူရေးသားခဲ့သည့် dispatch logistics ပက်သက်ပါဝင်သည့် open-source ဆော့ဝဲများသည် ယခုအချိန်အထိပင် တက္ကစီယဉ်မောင်းကုမ္ပဏီများက အသုံးပြုနေဆဲ ဖြစ်သည်။ နယူးယောက်တက္ကသိုလ်သို့ မပြောင်းမီ MissouriRolla တက္ကသိုလ်တွင် နှစ်နှစ်ကျော် (၁၉၉၅− ၁၉၉၇) ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော် သူသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းထွက်ခဲ့သည်။ သူသည် နယူးယောက်တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေစဉ်တွင် တွစ်တာကို ဖန်တီးရန် စိတ်ကူးရှိခဲ့သည်။
Dispatching နှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းတွင် ပရိုဂရမ်မာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ် ဒေါ်ဆေးသည် ကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်သည် ၂၀၀၀ ခုနှစ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ Oakland ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဝဘ်မှတစ်ဆင့် အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အငှားယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သည်များ၊ ပို့ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ His other projects and ideas at this time included networks of medical devices anda"frictionless service market". သူ၏ အခြားသာ စီမံကိန်းများနှင့် စိတ်ကူးများတွင် ဆေးပညာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကွန်ရက်များနှင့် Frictionless service market တို့ ပါဝင်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် သူသည် ဝဘ်ပေါ်တွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ စာတိုများဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ရန် စိတ်ကူးခဲ့သည်။
သူသည် မက်ဆေ့များကို ချက်ချင်းပို့နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆော့ဝဲအသုံးပြုသူများသည် သူတို့၏ စာသားများကို သူငယ်ချင်းများအကြား အလွယ်တကူ မျှဝေနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် Odeo ကို စာသားမက်ဆေ့တွင် စိတ်ဝင်တစားရှိလာစေရန် ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်ဆေးနှင့် Biz Stone သည် စာတိုမက်ဆေ့နှင့် သင့်လျော်သည့် မက်ဆေ့စာသားကို စိတ်ကူးရရှိခဲ့ကာ နှစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် တွစ်တာကို တည်ဆောက်ရန် မူရင်းပုံစံကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ များစွာသော အသုံးပြုသူတို့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Evan Williams ထံမှလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရရှိခဲ့သည်။
ဝီလီယမ်၊ စတုန်းနှင့် Noah Glass တို့သည် Obvious Corporation ကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည် နောင်အခါတွင် တွစ်တာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်ဆေးသည် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်ဆေးသည် ဆန်ဖရန်စစ်စကို၏ အနီးရှိ Sea Cliff သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Golden Gate, Marin Headlands နှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ သူသည် မနက်တိုင်း အလုပ်သို့ ငါးမိုင် လမ်းလျှောက်ကာ သွားသည်။ ထိုအခိုက်အတန့်ကို “very clearing time” ဟု သူက ပြောသည်။ သူသည် Kendrick Lamar ၏ ဂီတနှင့် ပြင်သစ်ရေဒီယိုဌာန FIP ၏ အားပေးသူလည်း ဖြစ်သည်။
↑ "Twitter names Jack Dorsey as CEO"၊ CNN Money၊ October 5, 2015။
↑ Spangler၊ Todd။ "Twitter CEO Jack Dorsey Declines Compensation in 2017 for Third Straight Year"၊ Variety၊ April 11, 2018။
↑ Jack Dorsey။ Forbes။
↑ Board of directors – About။ Twitter။
↑ About Square။ Square။
↑ Dorsey, Marcia [marciadorsey] (November 19, 2013)။ This date/day is one of the BEST days of my LIFE! I am SO BLESSED...🎈Happy Birthday Jack Patrick Dorsey, (aka) @jack!။
↑ Strange, Adario။ "Flickr Document Reveals Origin Of Twitter"၊ Wired News၊ CondéNet၊ April 20, 2007။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ Glaser၊ Mark။ "Twitter Founders Thrive on Micro-Blogging Constraints"၊ MediaShift၊ May 17, 2007။
↑ Robehmed၊ Natalie (September 30, 2014)။ The youngest billionaires on the Forbes 400: 11 under 40။ Yahoo! Finance။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ ၁၆.၂ Barker၊ Tim။ "Native son sets St. Louis atwitter"၊ November 15, 2009။
↑ Dorsey, Jack [jack] (September 3, 2013)။ Me in my (very) short-lived days asavintage clothing model: flic.kr/p/hG5x5။
↑ Dorsey, Jack [jack] (May 15, 2015)။ @ScottLucas86 @LizFiandaca @jeremys did it include my modeling days? m.flickr.com/#/photos/jackd…။
↑ Dorsey၊ Jack (July 13, 2006)။ I read Gray's Anatomy။
↑ Dorsey၊ Jack (July 13, 2006)။ Noele took pictures of me။
↑ Dorsey၊ Jack (July 13, 2006)။ Who needsanosering?။
↑ "12 of the most successful entrepreneurs who dropped out of college"၊ September 22, 2016။ January 16, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bussgang၊ Jeffrey။ "When Jack Dorsey Met Fred Wilson, And Other Twitter Tales (Book Excerpt)"၊ April 27, 2010။ "Jack ... moved to New York, transferred to NYU, and started writing dispatch software ... 'They're all reporting constantly where they are and what work they're doing ... I thought that abstraction was so cool that I wanted that same thing for my friends.'"
↑ BusinessWeek။ "Tech's Next Gen: The Best and Brightest"၊ BusinessWeek၊ The McGraw-Hill Companies၊ March 26, 2007။
↑ Dorsey, Jack။ "To be clear: I didn't attend Cornell (and didn't invent Twitter there)."၊ Twitter၊ April 8, 2009။
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ ၂၆.၂ Dorsey, Jack (March 24, 2006)။ twttr sketch။ Flickr။ Yahoo!။
↑ Hoge၊ Patrick။ "Executive of the Year: Jack Dorsey"၊ December 23, 2011။
↑ Thomas၊ Owen။ "We Hear Twitter Cofounder Jack Dorsey Now Lives In A $10 Million House"၊ Business Insider၊ June 18, 2012။
↑ Jack Dorsey walks5miles to work every day—and he says it's the best investment he can make။ CNBC (July 11, 2018)။ August 14, 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Barron’s 2018
↑ Belsoeur၊ Camille (September 17, 2017)။ Oui, FIP est bien la meilleure radio au monde (in French)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျက်ဒေါ်ဆေး&oldid=445499" မှ ရယူရန်
၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၃:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၃:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။